Saturday February 15, 2020 - 08:23:51 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wasiirka Amniga ee DFS Maxamad Abuukar Islow oo saacadihii lasoo dhaafay la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in ay isbadal ku sameynayaan amniga magaalada Muqdisho ayna rajeynayaan inuu ka roonaado sida uu haatan yahay.
Wuxuu sheegay in ay fogeynayaan xuduuda Maka Almukarrama iyo Wadnana islamarkaana ay geynayaan jidka 30-ka ama kan warshadaha, halkaasoo ay dhigi doonaan dhagxaan badan.
Wuxuu xusay in dhagxaantu ay dhibaato ku hayaan bulshada laakin haddana ay ka fursan waayeen balse arrintan ayaa dhibaato weyn iyo go’doomin hor leh ku keeni karta qeybta kaliya ee magaalada ee uu dhaqdhaqaaqa bulshada kusoo haray.
Wasiirka Amniga ee dowladda, Maxamad Abuukar Isow ayaa waxa uu leeyahay milkiyadda Warshad sameysa dhagxaanta waaweyn ee jidadka lagu gooyo, ujeedadiisuna waxay tahay inuu sii ballaariyo ganacsigiisa si uu dhaqaale badan uga sameeyo.
Inkastoo Wasiirku uu sheegay in dhagxaanta ay uga hor tagayaan weerarada lagu qaado xarumaha dowladda, haddana sida qof walba u muuqata, dowladdu ma awoodo in ay is hor taagto weerarada ku tala galka ah ee ay Al-Shabaab ku qaadaan xarumahooda, waxaana ugu dambeeyay weerarkii lagu galay hotelka SYL, oo u dhow madaxtooyada.